INkosi iya kubhengeza ukuba isiphelo kunye nengozi iya kuza | Apg29
INkosi iya kubhengeza ukuba isiphelo kunye nengozi iya kuza
KuHezekile isahluko sesi-7, iNkosi iprofeta kuHezekile kwaye iyathetha ngexesha elimnyama nentlekele ezayo. Ingozi eyahlukileyo ngokupheleleyo, kwaye iyodwa ngohlobo lwayo.
UHezekile 7: 5 - Itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi, Yabonani, kuza intlekele, intlekele yeza ngohlobo lwayo. Isiphelo siyeza, ewe, isiphelo siyeza! Iyaphakama ize kuwe. Khangela, uyeza!
KuHezekile isahluko sesi-7, iNkosi iprofeta kuHezekile kwaye iyathetha ngexesha elimnyama nentlekele ezayo. Ingozi eyahlukileyo ngokupheleleyo, kwaye iyodwa ngohlobo lwayo. Uyabhengeza ukuba umhla wokugqibela womntu uphelile, ukuba usuku luphelile kwaye ukuphela kuphezu kweembombo zone zelizwe. INkosi ikhankanya izibetho ezizayo ezinjengekrele, indlala, nendlala. Uthetha ngemeko apho kungekho mandla kunye noxinzelelo, apho izandla zabantu zityibilika kunye namadolo abe njengamanzi. La magama awasebenzi ngexesha likaHezekile kuphela, kodwa ngamagama esiprofetho sexesha esiphila kulo singena kulo.
I-FEMA ifumene amandla
I-FEMA imele i-Arhente yoLawulo lweNgxakeko ye-Federal kwaye yi-arhente yaseburhulumenteni e-United States esekwe kwintlekele enkulu kunye / okanye iimfazwe. Okwokuqala ngqa kwimbali yase-US, onke amazwe angama-50 atyikitye isimemezelo sentlekele sikamongameli sokuba bakwimeko yentlekele. Oku kuthetha ukuba kungumgaqo we-FEMA othathe amanye okanye amanye amalungu xa kusenziwa izigqibo kumlo ochasene nentsholongwane ye-corona. Phakathi kwezinye izinto, izindululo zenziwe ze-FEMA ukuba ijonge kwaye ilawule ukuba zeziphi iimpahla ezishiya ilizwe. Oku kuthetha ukuba kwiziganeko ezizodwa, igunya leentlekele le-UFA lithatha indawo, kwaye ilizwe litshintshelwe kwimeko yamapolisa.
Ngaphambili ndibhale kwakhona indlela i-United States ebonakala ilungiselela ngayo intlekele enkulu kweli lizwe ngokuseka ezi "Fema Camps", ezikwi-United States, uninzi lwazo olufana neenkampu zoxinaniso okanye zentolongo. Namhlanje azinanto, kodwa zikulungele ukufumana amashumi amawaka abantu kwiimeko zonxunguphalo okanye zemfuno. Umbuzo kukuba ezi nkampu ziya kuthi kwixesha elizayo zisetyenziselwe ukohlwaya okanye ukubulala abantu ngexesha lembandezelo, abangakhethiyo ukuthatha uphawu lwerhamncwa.
Xa sibona indlela oorhulumente kunye nobunkokeli basabela ngayo, kukuziqhelanisa ngokubanzi noko kuzayo. Njengoko ukuqhubela phambili kusenzeka, siya kuva ukuba amazwe atshintshwa njani aba ngamapolisa, apho imithetho eyondeleleneyo iyakwenzeka, apho uya kuba nethuba lokohlwaya abantu abangaguqukanga kule mithetho kunye namanyathelo achasene nobukristu. Uloyiko olufanayo olukhoyo ebantwini namhlanje luya kuba lukhulu ngakumbi ngexesha lokubandezeleka kwaye uya kuvuma ukwenza nantoni na ukuzisa uxolo. Ekuphela kwabantu abangayi kuqubuda kwaba bantu baphumelelelwa uKrestu ngeli xesha lesiphithiphithi- apho unika khona ubomi bakho basemhlabeni, ukuphumelela ezulwini.
UYesu uyeza kungekudala!
Onke amazwe angama-50 phantsi kokubhengezwa kwentlekele okokuqala kwimbali yase-US | TheHill